Bee Products: I-Original Superfoods - J & S Botanics
Iimveliso zeenyosi: I-Superfoods yoqobo
Le nyosi honey eqhelekileyo yenye yezinto eziphilayo ibalulekileyo wendalo. Iinyosi zibaluleke kakhulu yemveliso yokutya ukuba thina bantu ningatyi ngenxa yokuba umungu izityalo njengoko bathe bakubutha nencindi yeentyatyambo. Ngaphandle iinyosi besiya kuba ixesha nzima ukukhula kakhulu ukutya kwethu.
Ukongezelela ekusincedeni kunye neemfuno zethu yezolimo, iinyosi ukwenza iimveliso eziliqela ukuba singakwazi kuvuna kwaye usebenzise. Abantu baye ukuqokelela nokusebenzisa kwabo eminyaka nokusebenzisa kwabo ukutya, flavoring, kunye namayeza. Namhlanje, inzululwazi lwale mihla kubambisa ukuya koko Bendisoloko ndisazi: iimveliso inyosi kuba nexabiso elikhulu amayeza nasekondleni.
Ubusi imveliso yokuqala kwaye icace efikayo engqondweni xa ucinga iimveliso bee. Kuyinto lula ifumaneka kwiivenkile zokutya kunye nabantu abaninzi abasebenzisa ngayo nangoku endaweni iswekile ecokisiweyo. Ubusi ukutya iinyosi ukwenza ngokuqokelela nencindi yeentyatyambo. Kugilwa umpe ubusi ngokuthi nokusoloko ndiphindaphindana novoto uze uyivumele komphunga ukuya ingqalelo ezi iswekile ezenza izithako yayo ephambili. Ukongezelela iswekile, ubusi iqulethe izixa onomkhondo weevithamini, iiminerali, ifayibha, iiproteins, kunye nezinye izinto.
Kwabhalwa yobusi ohlukileyo kulawo kunye indlela entle nakwezinye iswekile. Kodwa iinzuzo honey xa uye kude ngaphaya incasa nobumnandi. Ubusi izibonelelo zempilo eziliqela, kokubini njengento udle njenge amayeza engundaba. Yazi ke, ukuba ubusi ozisebenzisayo kufuneka ekrwada kunye engekalungiswa.
Antioxidants . Ubusi osisityebi antioxidants, ezinceda ukulungisa umonakalo owenziwe imizimba yethu ubuthi lokusingqongileyo. I-mnyama ubusi, Antioxidants ngakumbi langoku kuwo.
Isiqabu nokuthile . Ubusi ekrwada kunye engekalungiswa iqulethe zamavumba nezidlo ezisuka kwindalo, kuquka nomungu, ukungunda, nothuli. Ukuba udla kancinci ubusi engacocwanga eziveliswe zengingqi yakho yonke imihla, uya kufumanisa ukuba kuzithuthuzela iimpawu zakho uyaliwa. Xa nomthamo kunye zamavumba uzakhela okukwazi yendalo kubo.
Zempilo ukudla . Ubusi kuye kwabonakala ukuba ukuphucula ukwetyisa ngeendlela ezimbini. Kwisiqwenga ephezulu zesisu iimpawu antibacterial nobusi kunganciphisa amanqanaba iintsholongwane ezibangela izilonda. In the honey colon inika probiotics ukuncedisa ekugayeni.
Ephilisa amanxeba . Njengoko isithambiso mlonyeni, nobusi ingasetyenziswa ukunyanga amanxeba. It lineziphumo zintsholongwane kwaye igcina amanxeba acocekileyo ukuze babe aphilise ngokukhawuleza.
Imiphumela Anti-arhabaxa. Ukudumba Acute kuyinxalenye yendalo lokuphiliswa, kodwa ephantsi-grade, nangokurhala esinganyangekiyo ethwaxa Amerika abaninzi kangaka ngenxa ukungatyi kubi. Ubusi yaziwa ukunciphisa komtshiso engapheliyo imithambo enegalelo ukuba isifo sentliziyo. Kwakhona omeleza umlinganiselo phakathi cholesterol okulungileyo nokubi.
Ukukhohlela ingcinezelo. Ixesha elizayo unayo umkhuhlane bongeza itispuni nobusi ikomityi yeti eshushu. Ubusi ofihla a khohlo kwaye kukho ubungqina ukuze kunceda ukuba ndiphilise ebandayo nokunciphisa ubude bayo.
Chwetheza-2 Diabetes. Kuba abantu uhlobo-2 seswekile, kubalulekile ukuba kukukhukulisa egazini kunye neswekile. Ubusi ukhululeka ngokucothayo kungena egazini kunokuba iswekile ethe shinyi, nto leyo eyenza kube ukukhetha ngcono seswekile.
Bee umungu eyahlukileyo nobusi. Yeyona umungu ukuba iinyosi ziye eziqokelelwe iintyatyambo kunye ezipakishwe granules amancinci. Kuba iinyosi, iibhola umungu zigcinwa kwi indlu kwaye lusetyenziswe njengomthombo protein. Njengoko baphindele umungu kwi nezinye iincindi kuyasetyenzwa ezidityaniswe kuyo kuquka enzyme ukusuka inyosi ukuba amathe, iintsholongwane, kunye nencindi.
Kuba abantu, bee umungu i usomandla sempilweni kwaye kukho izizathu ezininzi ukuba ungayisebenzisa njengendlela njengenxalenye ukutya kwakho rhoqo. Kubalulekile ukwazi ukuba bee umungu abuyi kufunyanwa kwezinye iimveliso inyosi njengobusi kunye ijeli yasebukhosini. Kwakhona balumkeleni bee iimveliso nomungu kunye nezongezelelo. Le mveliso zendalo kwaye zinokude yingozi.
Gcwalisa isondlo. Bee pollen iqulethe zonke izondlo thina bantu kufuneka kuyo granules ezincinane. Kuye protein, isitatshi, amafutha, antioxidants, iivithamini, neeminerali. It is a ukutya.
Ulawulo Weight. Bee pollen kuye kwafunyaniswa ukuba ukunceda abantu ukunciphisa nokulawula ubunzima xa esetyenziswa ukuncedisana ne-ukutya okunempilo umthambo rhoqo. Kusenokuba kunceda ngokuvuselela yokucolwa yomzimba.
Zempilo ukudla. Uphando lubonise ukuba ukutya bee umungu unako ukuphucula impilo yakho yokwetyisa. Oku kuchazwe yi yokuba iqulethe ifayibha kwakunye probiotics.
Anemia. Izigulane zobuthathaka begazi banikwa bee umungu zafumana ukwanda iiseli ezibomvu zegazi egazini. Kutheni le nto ayenziwanga kakuhle, kodwa bee umungu kufakelelwa kubonakala ukunceda abantu igazi.
Amazinga Blood cholesterol. Bee umungu xa besitya iye yabonisa ukulawula amanqanaba cholesterol egazini. Ibangela amanqanaba cholesterol olungileyo (HDL) ukuya phezulu, ngelixa amanqanaba cholesterol embi (LDL) ukuya ezantsi.
Uthintelo Cancer. Xa izifundo kunye neempuku, Inyosi nomungu ekutyeni kuthintele ukuyilwa yamathumba.
Ubude. Izifundo ezininzi zophando zibonise ukuba bee umungu inegalelo ukuba linyuke kweenkqubo ezithile wokwaluphala. Kubonakala ukuba kunyuswe inkumbulo, ukukhuthaza ukutya, ukomeleza intliziyo yegazi, kwaye ubonelela izondlo abantu abaninzi abanalwazi njengoko bekhula.
Mazingabhidaniswa kunye nobusi, owondla iinyosi abasebenzi, ijeli wobukhosi ukutya bee ukumkanikazi, kwakunye mibungu ngayo kuyo. ijeli Royal ngomnye wemiba ejongene iinguqu ngumbungu ibe ukumkanikazi kunokuba inyosi ngumsebenzi. Ukubunjwa zejeli basebukhosini kubandakanya amanzi, iiproteins, iswekile, kancinci amanqatha, iivithamini, antioxidants, imiba isibulala-zintsholongwane, izimbiwa umkhondo, kunye nee-enzayim. Kwakhona, uquka compound ekuthiwa queen bee acid, nto leyo abaphengululi uphando, kwaye Kucingelwa ukuba ibe ngundoqo ekuguquleni i bee ubusi eqhelekileyo kwi ukumkanikazi.
Ukhathalelo lolusu. Ijeli Royal inokufumaneka kwezinye iimveliso beauty mlonyeni kuba mhlawumbi ukunceda ukukhusela ulusu elangeni. Kusenokwenzeka nokuba ukulungisa ezinye umonakalo sele olubangwa lilanga, kuquka ukubuyisela collagen nokunciphisa ukubonakala amabala brown.
Cholesterol. Njengazo zombini ubusi bee umungu, odlayo ijeli lasebukhosini kuye kwaboniswa ukuba ukulungelelanisa cholesterol okulungileyo nokubi egazini.
Iipropati Anti-ithumba. Ezinye iintlobo zophononongo ziye lwabonisa ukuba ijeli yobukumkani, xa ungabutofela ziiseli zomhlaza, ezinokucothisa ukukhula yamathumba.
Zempilo Reproductive. Ezinye sisetyenziswe zejeli yasebukhosini bathi ngayo ukuphucula ukuchuma umfazi kwaye nkqu Bacinge iimpawu PMS.
Zempilo ukudla. Ijeli Royal kwaziwa ukuba akwazi ukupholisa iqela iimeko isisu nezilonda ukuya ukungacoleki kokutya ukuze kwesisu.
Okunye Bee Products
ubusi ekrwada, eziphilayo, kwaye engekalungiswa, bee umungu, yaye ijeli asebukhosini kulula kakhulu ukufumana kwi akho ezempilo ozithandayo, okanye okungcono kodwa, a beekeeper yasekuhlaleni. Kukho ezinye izinto ezimbalwa ezenziwe leenyosi indlu yokuba fundanga ngokunjalo kwaye ezo akukho lula ukufumana izandla zakho. Propolis, umzekelo, na umbandela emnandi ukuba iinyosi enze etyebile, abathi bawasebenzise ukuba kutywinwe iintanda amancinci nasemingxunyeni zinto zizise endlwini yazo.
Kuba abantu, propolis ingasetyenziswa kwizicelo mlonyeni. Asinto imveliso ukutya okunesondlo, nangona usetyenziswe ukwenza ukuhlafuna itshungama. Propolis uye iipropati antibacterial kwaye liye lasetyenziswa njengeyeza engundaba amanxeba, amaqhakuva, kunye irhashalala. ubungqina Limited ubonisa ukuba ukuze akuncede kwakhona ukuba ukunyanga herpes, usulelo izinyo, kunye nezifo arhabaxa. Le abubungqina obupheleleyo, kodwa propolis kukhuselekile ukuyisebenzisa.
Fini kwento olunamafutha iinyosi usebenzise ukwenza inani elikhulu bamanqatha zabo yobusi. Kuyinto ezityiwayo ngengqiqo ukuba nzima ukugaya. Asinto ezinobuhlungu, kodwa akayi kufumana ukutya eninzi kuwo xa uzama kusidla. Oko kulungile ukuba wenza zendalo kwizinto zokuthambisa, iisepha, izithambiso, namakhandlela.
Ukusebenzisa Bee Products in Smoothies
Sthandwa, bee umungu, yaye ijeli royal sonke kongezwa smoothies zakho. Into enkulu malunga bee umungu nobusi kukuba zimnandi abakhulu kwakunye nokunika nina izibonelelo zempilo emangalisayo. Bee pollen ayikho ivuza ubusi, kodwa unayo incasa emnandi. It is a osisityebi ukutya, ngoko angenise loku kancinane. Qala iinkozo ezimbalwa ngexesha ngokuthe ngcembe ukwandisa inani ozisebenzisa phakathi itispuni enye icephe smoothie ngalinye. Zama alpha bee umungu ibe smoothies yakho ukufefa phezu ezifana olitshizayo kwi ice cream. Ngokuba yonke iresiphi zam smoothie ukusebenzelana bee umungu, cofa le linki ingezantsi.
Bee Smoothies Umungu
Ungadibanisa ubusi ngokungakumbi smoothies zakho endaweni yayo nayiphi na enye nangoku ulusebenzise. It utshata kakuhle zonke ezinye flavour, kodwa kwakhona phezu ngokwayo. Ngalo lonke ixesha khangela ubusi eziphilayo ekrwada kwakunye nokuba wena uyakwazi ukufumana imveliso ezenziwe, loo nto ingcono. Khangela market ngumfama ekufuphi kuwe ukuba ubusi yasekuhlaleni.
Kwabhalwa zejeli wobukhosi ukuba nomtsalane kubo bonke abantu. Kusenokuba apile, ngoko ke abathile nilibhale, kukhona kancinci. Iindaba ezimnandi kukuba wena kudingeka nje kancinci kuwo (malunga itispuni smoothie ngalinye) ukuze ufumane izibonelelo zempilo kwaye bafihla oko smoothie lakho ntlobo eyomeleleyo. Enyanisweni, zama ikhodi ngayo ngobusi ukufihla ubumnandi.
iimveliso Bee iyamangalisa ngenxa yokwanelisa kwawo ngesondlo kunye amandla okuphilisa umzimba oluntu eziliqela iindlela. Hlala Lumka xa usebenzisa ezi mveliso xa wena iinyosi komzimba okanye ucinge ukuba. Nangona ezinqabileyo, ukuba umzimba ulwamvila bee, nayiphi na enye yezi mveliso bee kungabangela ukuba yokusabela ngokunjalo.
Yintoni na amava yakho iimveliso inyosi? Ingaba unayo oyithandayo? Nceda undixelele ngokuyeka izimvo ngezantsi.
ixesha Post: Dec-13-2016
Wazi ntoni ngeSt. J ...
[Yintoni iSt John's wort] iSt John's wort (Hypericum perforatum) inembali yokusetyenziswa kwayo njengeyeza elisusela ...